Dagaal khasaare gaystay oo Moqdisho ku dhexmaray xalay ciidanka dawladda oo kaashanaya AMISOM iyo kooxda Al-shabaab. – Radio Daljir
Dagaal khasaare gaystay oo Moqdisho ku dhexmaray xalay ciidanka dawladda oo kaashanaya AMISOM iyo kooxda Al-shabaab.
Nofeembar 15, 2011 12:00 b 0
Moqdisho, Nov, 15 ? Dagaal khasaare badan dhaliyay ayaa habeenkii xalay ahaa ka dhacay magaalada Moqdisho, kaasi oo u dhaxeeya ciidanka dawladda oo kaashanaha AMISOM iyo kooxda Al-shabaab.
Warar ay Radio Daljir ka heshay magaalada Moqdisho ayaa ku waramaya in dagaalkii xalay ay soo qaadeen kooxda Alshabaab, isla markaana ay weeraro ka fuliyeen fariisimo kale duwan oo ciidanka dawladdu ay ka samaysteen degmooyinkii ay kala wareegeen kooxda Al-shabaab. Dabadeedna ciidanka dawladdu ay sameeyeen iska caabin xooggan.
Khasaaraha ugu badan ee dagaaladii xalay ayaa lagu waramayaa inuu waajahay dad rayid ah oo ku sugnaa meelo ka agdhaw Isgoyska Sos, War-cadde, iyo degmooyin kale oo ay gacanta wali-ku hayaank ciidanka dawladda iyo kuwa AMISOM.
Warar faah-faahsan oo ku saabsan khasaarihii dhabta ahaa ee dagaalkii xalay wali lama hayo, balse dhinacyada dawladda iyo Al-shabaab ayaa sidii caadada ahayd dagaalkaasi ku kala sheegtay guulo kale duwan.
Wixii war ah oo kasoo kordha dagaalada Moqdisho kala socda Daljir.com
Bilayska Muqdisho oo xalay qabtay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa iyo dadkii saarnaa haatanna wali la baarayo.